Ciidamadda amniga Kenya oo soo qabqabtay tuugada Isgaarsiinta telefoonada lacagaha ku dhaca – Madal Furan
Hoy > Warka > Ciidamadda amniga Kenya oo soo qabqabtay tuugada Isgaarsiinta telefoonada lacagaha ku dhaca
Nayroobi (Madal Furan) – Laamaha amniga dalka Kenya ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysanayaal lala xariirinayo inay u dhacaan telefoonada ay dadka Kenyanka ahi u adeegsadaan gudaha degmada Kiambu.
Ciidamo ka socday kuwa dambi baarista ee DCI-da ayaa sidoo kale qabtay 30,000 oo ah lafta mobile-lada ama Sim kaadska, 240 iphone, Labo Computers iyo nooca gacanta ee loo yaqaano Laptop.
Howlgalka lagu soo qabqabtay eedeysanayaasha iyo qalabka oo dhacay shalay ayaa waxaaa kaloo lagu helay 150 Iphone, nooca MI iyo qalab kale oo electronic ah.
Dadka loo xiray falkani oo wali aan magacyadooda la shaacin ayaa lagu wadaa in maanta la horkeeno maxkamada iyagoo wajahaya dambiyo ka dhan ah isgaarsiinta iyo inay si sharci daro ah ku haysteen Sim kad-yo.
Agaasimaha ciidamada dambi baarista George Kinoti ayaa warbaahinta u sheegay in la xiray mid kamid ah goobo ganacsi oo dhanka isgaarsiinta ah oo kutaala Ruiru kadib markii laga shakiyay.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo badanayay dad ka cabanaya lacago laga lunsaday kadib marka loo soo diro qoraal la isaga dhigayo inay abaal marino ku guuleysteen ama in shirkadda ay adegsanayaan ay abaalmarino siineyso.
21- bishii lasoo dhaafay ee July ayey aheyd markii shaqaale ka howlgala shirkadda Safaricom iyo arday wax ka dhigata Jaamacada JKUAT lasoo taagay maxkamad kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay u dhacaan talefoonada gacanta.
Al-shabaab oo sheegtay weerarkii lagu dhaawacay Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda Sare ee Puntland.
Mustafe Cagjar oo cagta saaray waddadii Cabdi Maxamuud Cumar?